विश्वकप फुटबल ट्रफीको एसियाली यात्रा - खेलकुद - साप्ताहिक
विश्वकप फुटबल ट्रफीको एसियाली यात्रा
विश्वकप फुटबल ट्रफीलाई कुनै पनि देशको राष्ट्राध्यक्षजस्तै सम्मान गरिन्छ । सुरक्षा पनि त्यस्तै । त्यसैले यो ट्रफी उचाल्ने दुई जना मात्र हुन्छन् भनिन्छ, पहिलो विश्वकप जित्ने कप्तान, अर्को त्यो ट्रफी पुग्ने देशका राष्ट्राध्यक्ष । अरूका लागि त्यो ट्रफीलाई नजिकबाट हेर्न पाउनु पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ, छुन पाउने त परको कुरा । सन् २०१८ को विश्वकप छ महिनापछि रूसमा हुँदैछ र विश्वकपका सम्बन्धमा पूरा विश्वमा रोमाञ्चकता उत्पन्न गर्न अहिले ट्रफीको विश्व भ्रमण सुरु भैसकेको छ ।
यसलाई विश्वकपकै सबैभन्दा रोमाञ्चक मोडका रूपमा वर्णन गरिन्छ । सन् २००६ देखि विश्वकप ट्रफीको यात्रा प्रारम्भ भएको हो र विश्वकप सुरु हुनु ठीक अघि यस्तो यात्राको आयोजना हुन्छ । त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र यसको एउटा प्रमुख प्रायोजक कोकाकोलाले विश्वकप ट्रफीलाई विश्व घुमाउने ऐतिहासिक निर्णय गरेका थिए र यो क्रम अहिले ठूलो उत्साहका साथ अघि बढिरहेको छ, जुन मे १ तारिखसम्म चल्नेछ ।
पछिल्लो साता मात्र विश्वकप ट्रफीको यात्रा सुरु भएको थियो र यसको पहिलो गन्तव्य रह्यो— श्रीलंकाको कोलोम्बो । जनवरी २३ मा ट्रफीले पहिलो पटक श्रीलंकाली भूमि छोएको थियो । संयोगवश यसपटक ट्रफीले सबैभन्दा बढी एसियाली देशकै यात्रा गर्नेछ । सन् २००६ मा यो ट्रफीले २९ देशको यात्रा गरेको थियो । सन् २०१० मा ८४ देश पुगेको उक्त ट्रफीले सन् २०१४ मा ९० वटा देशको भ्रमण गरेको थियो । यसपटक आयोजक रूससँगै ट्रफी पुग्ने देशको संख्या ५२ छ ।
ट्रफीको कोलोम्बो यात्रा अघि लन्डनमा फिफाले विशेष कार्यक्रम आयोजित गरेको थियो । फिफाको दाबी छ— विश्वकप ट्रफीलाई नजिकबाट हेर्न पाउनु पनि कसैका लागि जीवनमा एकपटक मात्र आउने दुर्लभ अवसर हुन्छ । यसपटक ट्रफीले ६ वटा महादेशको यात्रा गर्नेछ । कोलम्बोमा विश्वकप ट्रफीलाई सार्वजनिक प्रदर्शनीका लागि राखिँदा ठूलो उत्साह देखिएको थियो । श्रीलंकाली फुटबल खस्किएको स्थितिमा ट्रफीको आगमनले त्यहाँको फुटबलमा नयाँ उत्साह सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
यसपटक विश्वकप ट्रफी कुन–कुन एसियाली देशमा पुग्नेछ त ? कोलोम्बो आइपुगेको ट्रफी नजिकैको छिमेकी माल्दिभ्सको माले पुगेको थियो । त्यसपछि थाइल्यान्डको फुकेट । त्यसपछि यो ट्रफी अरू दुई एसियाली देश लाओस र मकाओ पुग्नेछ । फेब्रुअरी ३ मा ट्रफी फेरि एसिया आउनेछ र त्यति बेला उसको गन्तब्ध हुनेछ, पाकिस्तानको लाहोर । त्यहाँबाट ट्रफी क्रमश: काजाकिस्तान, कीर्गिस्तान, उज्वेकिस्तान र तुर्कमिस्तानको भ्रमणमा लाग्नेछ ।
फेब्रुअरी १७ पछि यो ट्रफी फेरि एसिया आउनेछ र त्यति बेला यसलाई स्वागत गर्ने मौका पाउनेछ, प्यालेस्टाइनले । त्यहाँबाट ट्रफी जोर्डन र युएई पुग्नेछ । अप्रिलको अन्तिम साता यो ट्रफी तीन एसियाली देशमा पुग्नेछ र ती हुनेछन्— मंगोलिया, चीन र जापान । रूस पुग्नुअघि जापान ट्रफी यात्राको अन्तिम गन्तव्य हुनेछ । ट्रफीको अन्तिम प्रदर्शन रूसको भ्लाडिभोस्टकमा गरिनेछ र त्यहीँ ट्रफीको औपचारिक विश्व यात्रा टुंगिनेछ ।
चार वर्षअघि विश्वकप ट्रफी काठमाडौं आइपुगेको थियो र त्यो नेपाली फुटबलका लागि ऐतिहासिक घटना थियो । त्यो दिन थियो— ०७० पुस ६ । फिफाको विशेष विमानबाट ट्रफी भुटानको थिम्पु हुँदै काठमाडौं आइपुगेको थियो । त्यति बेला उक्त ट्रफीलाई नेपालका पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवसामु प्रस्तुत गरिएको थियो ।
त्यसपछि विश्वकप ट्रफीलाई दशरथ रंगशालामा सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि राखिएको थियो । त्यहाँ अपेक्षाअनुसार नै दर्शकको ठूलो घुइँचो लागेको थियो । फिफाको नीतिअनुसार विश्वकप ट्रफीलाई चार वर्षको अन्तरमा फेरि दोहराएर त्यही देशमा लगिँदैन । त्यसैले यसपटक ट्रफी काठमाडौं ल्याइएन, सम्भवत: सन् २०२२ मा आइने हो कि ?
प्रकाशित :माघ २४, २०७४
अब पटवालको जिम्मा
बियरस्टोको फरक कथा जेष्ठ २७, २०७६
सबैभन्दा लोकप्रिय को ? जेष्ठ २६, २०७६
अब पटवालको जिम्मा जेष्ठ २५, २०७६
अष्ट्रेलियाले ह्याट्रिक गरेको नवौं विश्वपकप २००७ जेष्ठ २४, २०७६
हेर्न लायक ६ खेलाडी जेष्ठ २४, २०७६